Namuhla, abakhiqizi ifenisha kuthiwa ekwandiseni ezahlukene imikhiqizo izingane. Phakathi izinto eziningi, SOFAS izingane ethandwa kakhulu sika nge imingcele. Letindlela kakhulu ukusiza abazali lapho ingane yabo akakwazi ukulala embhedeni zabo, ngaphandle Imingcele. Bayoba ugcine ingane ukuba bangawi bese kumnika ubuthongo ethule futhi zikhululekile.
Kuqhathaniswa uyisibonelo yendabuko SOFAS zezingane amabhodi e ifenisha izitolo musa zivame kakhulu. Akuwona wonke amafemu kahle ukukhiqizwa lento engangisidinga kakhulu. Kubalulekile ukuthi ingane bathandile embhedeni wakhe omusha.
Namuhla-ke ungakwazi ukuqhubeka SOFAS izingane ezincane sika ezinemibala egqamile kanye namafomu yasekuqaleni - ngesimo amathoyizi. Ephuma yezitolo, thatha kanye umthengi encane - ngisho noma kuzothatha iqhaza ukukhethwa. Ekuqaleni, ukubeka usofa nursery, ntambama uhlale kulo, ukudlala nengane yakho, funda incwadi kuye.
Izingane eziningi bayajabula ngokuthi bahlangana bashada izolala, "njengoba abantu abadala." Ngisho noma ukuthola esetshenziswa isiqephu esisha ifenisha Kulula, ukuphepha namanje inkinga. Ngokuvamile Amasofa izingane wenze ukuphakama amancane, kodwa bawe ngesikhathi sokulala - noma kunjalo ubumnandi ezingabazisayo. Kulokhu, ukusiza abazali futhi iza "ingubo entsha ifenisha."
Njengomthetho, izingane wathuthela SOFAS zezingane imingcele eneminyaka engu-eminyakeni emithathu kuya kwemine. Kunezikhathi lapho abazali ukuthenga amamodeli encane zezingane futhi aboshelwe kubo ucezu ifenisha ipuleti, limbozwa ngendwangu nge substrate esithambile.
ifenisha Good kumelwe nakanjani babe ezahlukene izinga ukusebenza. Ngokuqondene ifenisha izingane, i-materials emvelweni esetshenziswa, kanye ibulawa ngesihluku futhi inhlangano nezimfuneko bayanda.
ifenisha Wezingane kufanele kube ephephile. Ngakho-ke, yenza ajikelezayo, sebenzisa ngezikulufo ezifihliwe. SOFAS Wezingane njengoba imingcele sidala umgoqo uma ingane izoba Pheqa elele. Kodwa yena uyakwazi nganoma isiphi isikhathi ukushiya "ibhokisi" abo.
Lapho ekhetha usofa sibheke izinga embhedeni. Makudle ngezinto zemvelo lezisekelo wamathambo. Kufanele uqaphele ukuthi embhedeni zezingane amabhodi kufanele zihlanzwe kaningi - ngoba izingane zidlala kuphi, kuyilapho labo ku ingalali wakhe endaweni.
Sofa Upholstery kuyakhethwa ngendwangu engokwemvelo - ngabo kulula kakhulu ukulinakekela. Lokuthi kunilungele ngaphezulu ukuthenga imodeli ezinoqwembe esikhiphekayo - ingakhishwa wageza umshini uma kwenzeka ukusilaphazeka. Wezingane ifenisha abaklami njalo sisebenzela onobuhle ezintsha. Ngisho nanamuhla, emakethe ungabona amaphethini usofa ngesimo amafu, imoto nge ngemuva izindonga enqabeni, nokunye. D. Kukhona amamodeli namadivayisi ezengeziwe (Racks, amatafula, amabhokisi). Ungakhetha futhi ekhoneni SOFAS nengane amabhampa. Letindlela athandwa kakhulu futhi funa. Thenga kubo zingaqiniseka ngokuphelele kunoma yimuphi umkhaya - intengo zabo liyalingana yizinhlobonhlobo nokuqina kwayo.
I-Zinc unamathisele - sebenzisa abantu abadala nabantwana